Allaha ha u naxariisto Cismaan Ahmed Rooble oo London ku geeriyooday
Home Diaspora Allaha ha u naxariisto Cismaan Ahmed Rooble oo London ku geeriyooday
A llahabad ha u naxariistee waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday wasiirkii ugu horeeyay ee maaliyadda Soomaaliya, ahaana nin maalqabeen ah Cusmaan Axmed Rooble.
Cusmaan Axmed Rooble wuxuu sanadihii dambe marxuumku deganaa magaalada London, wuxaana la sheegay in uu u geeriyooday xanuun dhinaca kilyaha ah oo mudooyinkaanba uu la xanuunsanayay.
Geerida Cismaan Axmed Rooble waxaa saxaafada u xaqiijiyay wiilkiisa Axmed Cusmaan Axmed Rooble, waxaana lagu wadaa in berri lagu aaso magaalada London.
Marxuumka , wuxuu ahaa wasiirkii ugu horeeyay ee maaliyadda Soomaaliya, xilligii dowladdii madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan C/lle Cusmaan (Aadan Cadde). Waxaan si weyn looga yiqiin magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Dhamaan Bahda Midnimo waxey tacsi tiiraanyo leh u direysaa dhamaan caruurtii, eheladii iyo dhamaan ummada soomaliyeed waxeynu leenahay samir iyo imaan Ilaaah ha naga siiyo marxuumkana janadii fardowsa Illaah ha ha waraabiyo Amiina Amiin Aamiin….